Ciidamada AMISOM iyo Al-shabaab oo ku dagaalamay duleedka Muqdisho | KEYDMEDIA ONLINE
Ciidamada AMISOM iyo Al-shabaab oo ku dagaalamay duleedka Muqdisho
Dagaalka ayaa ka dhacay halka loo yaqaanno Arbacow oo kaabiga ku heyso deegaanka Ceelasha Biyaha ee duleedka Muqdisho.
MUQDISHO, Soomaaliya - Dagaal xooggan ayaa xalay ciidamada AMISOM iyo dagaal yahanno ka tirsan Al-shabab ku dhex maray duleedka magaalada Muqdisho, gaar ahaan halka loo yaqaanno Arbacow.
Dagaalkaan ayaa ahaa mid la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan, waxaa ayna dadka deegaanka sheegayaan in xalay la maqlay daryanka madaafiic ay ridayeen ciidamada AMISOM oo fariisin ku leh halka loo yaqaanno Arbacow oo Ceelasha Biyaha kaabiga ku heyso.
Dagaalka ayaa bilowday kadib markii xubno ka tirsan Ururka Al-Shabaab weerar ku dhufoo ka dhaqaaq ah ku qaadeen Xerada ciidamada AMISOM deganyihiin, waxaana xigay dagaal fool ka fool ah oo saacado ka qaatay, kaasoo ilaa hadda aan si rasmi ah loo ogeyn khasaaraha ka dhashay.
“Dagaalku waxaa uu ahaa mid culus oo la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan oo ay ku jireen madaafiic culus oo si weyn looga maqlay degaanada ku dhow Ceelasha biyaha” ayuu yiri goob jooge ku sugan degaanka oo saxaafada la hadlay.
Ilaa iyo hadda majiro wax war ah oo ka soo baxay maamulka Shabeellaha Hoose iyo taliska ciidamada AMISOM ee xalay saldhigooda Ceelasha Biyaha la weeraray, sidoo kale waxa khasaaro ah lama soo warin.